Sida iyo Goorta La Codsado Dugsiyada | Boston School Finder
Ma jiro hal isdiiwaan gelin ama nidaamka codsi oo ka dhexeeya dhammaan 200+ dugsi ee kuyaala Boston. Waa kuwaan tillaabooyinka lagu codsan karo dhammaan noocyada dugsiyada kuyaala Boston iyo goorta aad u baahan tahay inaad dhammaystirto tallaabooyinkan sannad dugsiyeedka 2020-2021.
Bilaha Noofambar, Diisambar, iyo Janaayo 2019, dulmar kusamee waxyaabaha aad kala dooran karto.
Dib u eegis ku samee noocyada dugsiyada kuyaala Boston (iyo meelaha ka shisheeya) ee ay heli karaan qoyskaagu.
Abuur liiska dugsiyada aad iska diiwaangelin doonto ama aad codsan doontid. Waxaan kugula talineynaa inaad tixgeliso nooc kasta oo dugsi ah, maadaama aadan dammaanad u heli karin meelayn lagaa siiyo dugsi gaar ah.
Ka baro xog dheeraad ah oo ku saabsan dugsi kasta oo kujira liiskaaga adoo adeegsanaya aaladeena Boston School Finder si aad u eegto boggaga Profile-ka dugsiga ee faahfaahsan ee dugsi walba oo liiskaaga ku jira AMA
Kafiiri dookhyadaada Dugsiga Boston Public Charter barta www.applybostoncharters.com.
Ka fiiri dookhyada dugsiyada diinta ee gaara loo leeyahay webseetka Xafiiska Dugsiyada Kaatooliga ah.
Ka fiiri dookhyada dugsiyada gaarka loo leeyahay webseetka Ururka Dugsiyada Madaxa Banaan ee kuyaala New England (AISNE).
Arag 33 degmooyinka ka qaybgalaysa barnaamijka METCO, kuwaasoo lagu helo nidaam bakhti-yaa nasiib ah. Codsiga bakhti-yaa nasiibka ah ee METCO wuxuu furmayaa Arbacada., Oktoobar 2, 2019 wuxuuna xirmayaa Jamcada., Janaayo 3, 2020.
Kudir codsigaaga bakhti-ya nasiibka METCO barta oonleenka ah ee www.metcoinc.org/services/apply
Bisha Janaayo, Febaraayo iyo Maarso 2020, iska qor oo codso dugsiyada ku jira liiskaaga.
Waxaad codsan kartaa noocyo badan oo dugsiyo ah oo aad sidaad rabto, laakiin ma jiro hal qaab oo isku si looga codsado dugsi kasta; nooc kasta oo dugsi ah wuxuu leeyahay habraac gaar ah.
Xusuusnoow: marwalba waad diidi kartaa kursi kasta oo aad iska diiwaangelisay ama aad codsatay oo aad heshay—laakiin ma diidi kartid kursi aadan helin maxaa yeelay iskama aadan diiwaangalin ama codsan.
Si aad iskaga diiwanagaliso Boston Public Schools, booqo barta DiscoverBPS.org iyo booqo Xaruunta Soo dhawaynta inta lagu jiro wareega diiwaangalinta muhiimada gaarka ah leh.
Diiwaangalinta mudnaanta leh ee loo samaynaayo ardayda galaaya fasalada K0, K1, 6, 7, waxayna 9 bilaabmaysaa maalinta Isniinta., Janaayo 6, 2020 waxayna xirmaysaa Jamcada., Janaayo 31, 2020.
Diiwaangelinta mudnaanta leh ee ardayda soo gelaysa dhammaan fasalada kale wuxuu bilaabmayaa Isniinta, Feebaraayo 10, 2020 wuxuuna xirmayaa Jimcaha, Abriil 3, 2020.
Wixii macluumaad faahfaahsan ah oo ku saabsan isdiiwaangalinta dugsiyada BPS, fadlan booqo tusmadeena Macluumaadka Sida la iska Diiwaangaliyo Dugsiyada BPS .
Si aad u codsato hanaanka bakhi-ya nasiibka ah ee Boston Dugsiyada Public Charter, kudir codsigaaga si oonleen ah www.applybostoncharters.org.
Codsiga bakhtiya-nasiibka ah ee dugsiyada charter ku wuxuu furmayaa Salaasada., Oktoobar 1, 2019 wuxuuna xirmayaa Sabtida, Feebaraayo. 29, 2020.
Si aad u codsato dugsiyada gaarka ah ee ku xiran diinta iyo dugsiyada madaxa banaan, fadlan kafiiri boggaga interneetka ee dugsiyada gaarka loo leeyahay si aad uga hesho macluumaadka codsiyada iyo waqtiyada u cayiman codsiyada.
Bilaha Maarso, Abriil, iyo Maayo 2020, dib u eegis ku samee meelaynnada dugsigaaga oo go'aan ka gaar.
Dib u eegis ku samee meelayntaada dugsiga. Ayadoo laga fiirinaayo noocyada dugsiyada aad codsatay, waxaad heleysaa ogaysiisyada meeleyn waqtiyo kala duwan:
BPS waxay caadiyan ogaysiiyaan qoysaska ardayda galaaya faslada K0, K1, 6, 7, iyo 9 meelayntooda dugsiga bisha Maarso; dhammaan fasalada kale waxay helayaan meelayntooda dugsiga bisha Maayo.
Boston public charter schools (Dugsiyada Dadweynaha Boston ee Charter ka ah) waxay sida caadiga ah ardayda u sheegaan natiijooyinka bakhtiya-nasiibkooda horraanta bisha Maarso.
Meeleynta dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo ogeysiisyada ayaa xilliyo kala duwan dhaca ayadoo ku xiran dugsiga.
Degmooyinka METCO waxay ogeysiiyaan qoysaska meelaynta xilliga gu'ga iyo xagaaga, illaa horraanta Febaraayo iyo dhammaadka Sebteembar, marka sannad dugsiyeedku uu mar horaba biloowday. (Sababtaas awgeed, METCO waxay kula talinaysaa qoysaska inay haystaan ikhtiyaariyada iska qorista dugsiyo kale oo u diyaarsan marka lagu daro codsashada bakhtiyaa nasiibka METCO.)
Marka laga hadlaayo meeleynta dugsiga ee ardaygaaga, natiijooyinka bakhtiya-nasiibka, aqbalaadda dugsiga, ogeysiisyada liiska sugitaanka, iyo go'aaminta kaalmada maaliyadeed ayaa diyaar noqonaaya, ka fikir waxyaabaha muhiimada koobaad uleh qoyskaaga iyo ardaygaaga. Si taxaddar leh dib ugu eeg waqti kasta oo kama dambays ah oo muujinaaya oggolaanshahaaga (haddii ay habboon tahay).
Ugu dambeyntiina, dooro dugsiga kuugu habboon oo ka qor ardaygaaga.
Mar alla markii aad go'aanka gaadho, horay usoco oo ardaygaaga ka qor dugsigiisa.